Alakamisy, May 19, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa mangataka faminaniana amiko ny olona, ​​dia matetika no tondroiko amin'ny olon-kafa. Tsy dia futurist aho, fa manana rakitsoratra tsara tsara amin'ny fahitana ny fiantraikan'ny fandrosoana amin'ny teknolojia amin'ny fividianana fividianana. Teknolojia iray izay nangina ahy kely fotsiny dia ny fampitomboana ny zava-misy sy ny zava-misy virtoaly. Mahafinaritra daholo izany, saingy mino aho fa mbola afaka taona vitsivitsy amin'ny fampiasana azo ampiharina isika. Raha fivarotana antsinjarany ianao, handeha aho